हाम्रोबारे विवरण - Cellapp | Helping Businesses Grow
सेल एप - नेपाल विशेष
केवल Business का लागि होइन, हामी यहाँ असर केन्द्रित छौ।
सेल एपले ग्लोबल Tech Industry मा ११ वर्षको अनुभव र पोर्टफोलियोको साथ नेपालको उत्कृष्ट स्वचालन कम्पनीको रूपमा विशेषज्ञता राखेको छ। सेल एपमा हामी समानान्तर रूपमामा Products र Leaders हरुको विकास गर्दछौं जसले अन्तत: Products लाई स्टार्टअपको रूप दिन्छ। हामी सामाजिक प्रभाव र Business Acceleration विचारहरुको लागी एक Incubator हो।
हाम्रो दृष्‍टि सरल छ – जीवनशैलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने र समस्याहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समाधान गर्ने। नेपालको आईटी कम्पनी हुनाले हामी टेक्नोलोजी र इनोभेसनको सहयोगबाट नेपालीहरुलाई नै प्रभाव पार्न चाहन्छौं।
हाम्रा विपद व्यवस्थापन प्रणालीहरु
विगतमा हामीले विकास गरेका केही प्रणालीहरुका पोर्टफोलियो
EmBlood - जीवन उद्धारकर्ता एप
तपाईंको खल्तीमा रहेको यस एप्ले तपाईंको जीवन बचाउन सक्दछ। कोही पनि, तपाईलाई कुनै दिन रक्त चाहिन सक्छ।
इरमा एकदम शक्तिशाली र आपत्तिजनक तूफान थियो। समुद्री तटमा बस्ने मानिसहरू आँधीबेहरीको चपेटामा हुन्छन। हामीले मानिसहरूलाई उनीहरूको वरपरको आँधीबेहरीको बारेमा जानकारी गराउने लक्ष्यले यस एप निर्माण गर्यौ।
नेपालमा बाढी पीडितलाई हामीले सकेसम्म सहयोग गर्नु हाम्रो मुख्य उदेश्य हो। पुश सूचना संचार, भर्खरको बाढी स्थिति, राहत टोलीमा सामेल हुन चाहने स्वयम्सेवक व्यवस्थापन जस्तो विशेषताहरु यो एप्मा छ।
रक्षा - ए.आई आधारित विपद व्यवस्थापन प्लेटफर्म
Rakshya एक प्लेटफार्म हो जहाँ सबै प्रकारको आपत / आपतकालीन प्रतिक्रिया आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ। पहिलो चरणमा, हाम्रो एप्स जस्तै Nepal Flood Relief, Women Harrasment, Hurricane Response र Blood Donation का लागि विकास गरिएका हाम्रा विगतका प्रणाली एकीकृत गर्दैछौं।
कोविड व्यवस्थापन प्रणाली
कोविड–१९ लाईभ ट्र्याकिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सिमा र सिप व्यवस्थापन तथा बिपद व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत हाल कोरोनाको ट्रायाकिङ, आइसोलेसनको जानकारी र दैनिक रिर्पोटिङ मोडुलर मोबाइल एप तथा वेब सिस्टममा ७०+ स्थानिय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ।
यस लकडाउनमा हामीले क-कस्लाई सहयोग गर्न सफल भयौ?
यस लकडाउनमा हामीले केही Organization हरुलाई आफ्नो Business Acceleration Plan मार्फत सहयोग गरेका छौ।
सेल एप Team
Your AI Sales Assistant
हामी यहाँ केवल Business को लागि मात्र होइन, हामी यहाँ Impact पार्न केन्द्रित छौ।
हामी एक इनक्यूबेटर हौ। हामी डाटा र टेक्नोलोजी मार्फत स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा iMpact र राम्रो परियोजनाहरू सिर्जना गर्दछौं।
Cellapp एउटा टेक Innovation कम्पनी हो। हामी विभिन्न संस्था र व्यवसायहरुलाई फास्ट Accelerating टेक्नोलोजी वितरण गर्छौ। हाम्रो विशेषज्ञ टोलीसँग ग्लोबल Technology उद्योगमा ११ बर्षको अनुभव छ र हामी हजुरको संगठनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं।
बैकएन्ड र डाटा ह्यान्डलिंग टिम
मोबाईल डिभेलपमेन्ट टिम
क्रीएटिव तथा फ्रोन्ट एन्ड टिम
रोबोटिक्स तथा AI टिम
हाम्रा पार्टनर / क्लाइन्ट्स हाम्रो बारेमा के भन्नुहुन्छ त?
सब भन्दा राम्रो कुरा मैले लोक्डाउन देखि देखेको छु! सेल एप र टोलीले विपद व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्‍यो र यसलाई प्रयोग गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई निःशुल्क प्रस्ताव गर्‍यो।सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि cellapp केवल आईटी कम्पनी मात्र होइन, तर विपद व्यवस्थापन र डिजिटल प्रशासनमा विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनी हो। सेलाप्पलाई चियर्स!
सह संस्थापक - UG Bazar
म सेल एपलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समता मानवतालाई सँगै ल्याउने मेरो एकमात्र सपना थियो। सेल एप टीमले मलाई उनीहरूको आश्चर्यजनक वेबसाइट र समर्थनको साथ सपना समावेश गर्न मद्दत गर्‍यो। म सेल एप र सम्पूर्ण टीमलाई अत्यन्त राम्रो कामका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उप - सभापति
हाम्रो हस्तकलाको लागी एक अद्भुत वेबसाइट को लागी सेल एपलाई धन्यवाद।